गायिका इन्दिरा जोशीले गरिन् इन्गेजमेन्ट (भिडियो सहित) — Imandarmedia.com
गायिका इन्दिरा जोशीले गरिन् इन्गेजमेन्ट (भिडियो सहित)
गायिका इन्दिरा जोशीले ‘सुटुक्क’ इन्गेजमेन्ट गरेकी छन्।गायिका जोशीले खुम्बु पुगेर फेसन डिजाइनर शरद केडियासँग इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन्। त्यो भिडिओ अहिले टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ।
इन्दिराले यसअघि आफू प्रेममा रहेको बताए पनि प्रेमीको नाम खुलाएकी थिइनन्। अहिले इन्गेजमेन्ट गरेको कुरा पनि उनी आफैंले भने औपचारिक रूपमा सार्वजिनक गरेकी होइनन्।
उनीहरूले इन्गेजमेन्ट गरेको भिडिओ क्याप्टेन विवेक थापाले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा राखेपछि वास्तविकता सार्वजनिक भएको हो।क्याप्टेन थापाले भिडिओको क्याम्पसनमा लेखेका छन्, ‘दुवै जनालाई उज्वल भविष्यको कामना!’
यसै गरि , फिल्म ‘घिन्ताङ’को छायांकन सुरु भएको छ । २० दिनको नियमित सेड्युल सहित फिल्मले काभ्रेको पनौतीबाट छायांकन सुरु गरेको हो । निर्माता निर्देशक दीपक श्रेष्ठले फिल्म छायांकनका लागि अहिले उपयुक्त समय पाएकोले सुटिङ सुरु गरेको बताए ।
फिल्मको छायांकन दसैँ अगाडि सकाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । केकी अधिकारी, गौरव पहाडी, नीर शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, रमेश अधिकारी, संगम भण्डारी र दीपाश्री निरौलाको मुख्य भुमिका फिल्ममा रहनेछ ।
राजु लामाको प्रस्तुति रहेको फिल्ममा दीपक शर्माको संगीत र संकल्प भुजेलको छायांकन रहन्छ । ६० लाखको लागत निर्माण अनुमान गरिएको फिल्म गत वैशाखमै सुरु गर्ने योजना निर्देशक श्रेष्ठको थियो । तर कोरोनाको कारण उनको योजना पूरा हुन सकेन ।
दीपकले ९ वर्षपछि यसै फिल्ममार्फत निर्देशनमा कम ब्याक गरेका हुन् । त्यसैले पनि उनी ‘धिन्ताङ’ आफ्नो महत्वाकांक्षी फिल्म भएको बताउँदै आएका छन् । छायांकन अगाडि पनि उनले फिल्मको एक्सरसाइज राम्रो गरेका थिए ।
युवतीहरुलाई आफू नुहाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चिन्ताले सताउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरुले नुहाउदा आफ्नाे शरीर र कपालको बारेमा चिन्ता गर्छन् । यस बाहेक उनीहरु बाथरुमभित्र आफैसँग छिल्लिने गरेको समेत अध्ययनले पत्ता लगाएको छ ।
केटीहरू अक्सर सम्बन्धबारे चिन्तित रहन्छन् । उनीहरू सधैं दिगो सम्बन्धको खोजीमा हुन्छन् ।त्यसैले उनीहरू अक्सर हाम्रो स’म्बन्ध कत्तिको टिकाउ हुनेछ ? के हामी सधैं यस्तै गरेर खुसी रहन सकौंला ? आदि सोचमा हराउने गर्दछन् ।केटीहरू आफ्नो कपालबारे पनि चिन्ता गर्ने गर्दछन् ।
नुहाउँदा केही कपाल झर्नु सामान्य कुरा हो तर केटीहरू भने यसबारे केही बढी नै गम्भीर भइदिने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरू नुहाउँदा विभिन्न हेयरस्टाइल कस्तो लाग्दो रहेछ भनेर ऐनामा समेत हेर्ने गर्दछन् ।
नुहाउँदा केटीहरू चिन्तित हुने अर्को विषय हो मोटोपना । अक्सर केटीहरू बाथरूमभित्र आफ्नो न’ग्न शरीर हेरेर आफ्नो फिगरबारे चिन्तित हुने गर्दछिन् ।
उनीहरूलाई त्यसबेला आफू मोटी भएको र अब शा’रीरिक व्यायाम थाल्नुपर्ने लाग्ने गर्दछ । केटीहरूले बाथरूममा आफ्नो प्रेमीको कल्पना समेत गर्ने गरेको बुझिएको छ ।
त्यति मात्र होइन प्रेमी भएका केटीहरूआफ्नो प्रेमीबारे सोचेर लजाउने उसले गरेका प्रशंसाहरू सोचेर खुसी समेत गरेको थाहा हुन आएको छ । केटीहरूले नुहाउँदा आफ्नो फिगर, सुन्दरताबारे त चिन्तित हुन्छन नै त्यसका साथै उनीहरूलाई आफूले नुहाउँदा धेरै समय लगाएको र मानिसहरूले के भन्लान् भनेर समेत चिन्तित हुने गर्दछन् ।
नुहाउने क्रममा हामी प्राय गल्ति गरिरहेका हुन्छौं जसले हाम्रो स्किन तथा कपाल को स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर गरेको हुन्छ । अनुहारको छाला निकै सेन्सेटिभ हुने गर्छ । फोर्सले आएको पानी, अति तातो वा अति चिसो पानीले अनुहार वा आँखालाई हानी पुर्याउँछ ।
अति तातो वा चिसो पानीले अनुहारको छाला र आँखालाई मात्र नभई कपालको टिस्युजलाई हानी पुर्याउँछ ।जसले कपाल झर्ने समस्या आउन सक्छ । साथै कपालको जरामा समेत असर पुगी बाक्लो कपाल पातलिने हुन्छ ।
अनुहारको छालामा पनि यसको असर यति पर्छ कि जसको कारण छालाको शक्ति शुन्य हुन सक्छ यसै कारण छाला सुक्खा हुन्छ ।धेरै समय पानीसँग खेल्नु हुन्न । यसले छालाको म्वाइस्चर कम गर्छ जसको कारण छाला ड्राई बन्छ ।यसै कारण चिल्लो छाला पनि सुक्खा बन्छ । जाडोको समयमा झैँ छाला फुट्ने समस्या हुन सक्छ ।
नुहाएपछी पुछ्ने तौलिया वा बडी स्क्रभर हामीले बाथरुममै राख्ने गर्नु हुन्न । कतिपय ट्वाइलेटसमेत भएको एटेच बाथरुममा झन् यस्तो तौलिया राख्नै हुन्न । यस्तो अवस्थामा नुहाएपछी सरिर पुछ्ने तौलियामा बिभिन्न ब्याक्टेरिया हुन सक्छन् । जसले हाम्रो छालामा बिभिन्न समस्या आउन सक्छन ।